Ahụ ike - gbasara ahụike ụmụ nwoke | Nwoke Nkecha
Ahụike na ọ bụghị naanị nke ụmụ nwoke na-abụkarị ihe kachasị mkpa anyị nwere na ihe anyị ga-echegbu onwe anyị maka ilekọta, ya mere na oghere a, anyị chọrọ ịnye gị ndụmọdụ, ndụmọdụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gbasara ihe niile metụtara ahụike.
Nakwa na ụdị a ị ga-ahụ ọtụtụ ederede nke ị nwere ike ilekọta ma mee ka ahụike gị dịkwuo mma ma ọ bụ nke ndị ị hụrụ n'anya, ya mere, atụfula ohere ịkwado akụkụ a maka enyi nwanyị gị ma ọ bụ ezinụlọ gị.
Esi ewepu blackheads
por Alicia tomero eme Ụbọchị 4 .
Blackheads bụ mkpokọta sebum na pores nke nwere ike ịta ahụhụ n'oge ọ bụla. Ha na-ata ahụhụ ...
Mkpụrụ osisi nwere shuga karịa
por Alicia tomero eme 1 izu .
Mkpụrụ osisi bụ otu n'ime nri kachasị mma anyị nwere ike iri, ọ bụdị akụkụ dị mkpa nke…
por Alicia tomero eme 1 ọnwa .
Ọtụtụ nri na-amalite n'ụkwụ aka nri na nsonaazụ ejedebe na-enwe afọ ojuju. Agbanyeghị, ọ bụrụ na mbelata ibu…
Inwe eriri akpụkpọ ụkwụ ọ bụ ezigbo akara?
por Alicia tomero eme Ọnwa 2 .
Ọ bụrụ na anyị na-eme egwuregwu mgbe ụfọdụ ma ọ bụ mgbe niile, n'oge ụfọdụ anyị nwere ike ịnwe mgbu akwara nke sitere na…
Anya dara n'ime ụmụ nwoke
por Alicia tomero eme Ọnwa 3 .
Anya dị omimi bụ ọdịdị na-adịghị mma nke nwere ike ịpụta na ụmụ nwoke. Ọnọdụ ya bụ naanị adịghị mma ...
ọrịa obi gbajiri agbaji
por Alicia tomero eme Ọnwa 5 .
Ụfọdụ ndị mmadụ n'ihi ihe dị iche iche abịala na-arịa ọrịa obi a na-akpọ "ọrịa obi gbajiri agbaji". Amaghị m…
Kedu ihe ịtụgharị 40 pụtara maka nwoke
por Alicia tomero eme Ọnwa 6 .
Ọ bụ ogbo pụtara na onye ọ bụla na-aga. Ee ma ọ bụ ee, nwoke ga-eru afọ 40 na ...
Otu esi abụ onye ka mma
por Alicia tomero eme Ọnwa 7 .
Ndụ anyị dum bụ mmega ahụ nke ịma aka na nkwalite mgbe niile. Ọtụtụ n'ime anyị na-ejikwa ike nke ịnwa ịdị mma ...
Kedu ka testicles dị n'ime
por Alicia tomero eme Ọnwa 8 .
Nnwale ahụ bụ gondolas nwoke (gland). Ha dị n'okpuru na n'akụkụ abụọ nke amụ. Ha nọ n'okpuru ...
Akpụ n'ọnụ n'ọnụ
Ọdịdị nke ngwongwo na mpi amụ na-abụkarị ọnọdụ nwere ike ibute ụfọdụ ụdị nsogbu bụ isi ...
Otu esi ezere ndị nwoke cellulite
Ụmụ nwoke na-arịakwa cellulite. Enweghị ahụ nke nwere ike iguzogide abụba mpaghara a na-atụ egwu, ọ na-apụtakwa site na ...
Ezigbo ibu na nwoke
Kedu ihe ọ bụ na otu esi egbochi ọrịa mmamịrị na ụmụ nwoke?
Sịga a na-asachapụ nke na-adịchaghị emerụ ahụ?
Phimosis, bu oria ojoo n’enwe nwoke
Balanitis: Itching na nācha ọbara-ọbara nke amụ
«Macril»: ​​Antifungal ude
Uru nke ibi úgwù
Nku anya gị ọ na-adapụsị nke ukwuu? N'ihi gịnị?
Kedu ihe bụ whiteheads na amụ?
Ọ bụrụ na ị were Viagra na ịchọghị ya?
A na-ere ọgwụ ndị megidere ejaculation
Echiche ụgha na eziokwu nke Viagra (I)
Apụl maka ihe otutu
Aghụghọ maka ntutu ajị agba ajị agba
Kedu otu esi alụ ọgụ mgbaàmà mgbe ị kwụsịrị ịse anwụrụ?